Dammaanad: 1.5 sano
Warshadaha Khuseeya: Dukaammada Qalabka Dhismaha
Ka dib Adeegga Dammaanadda: Taageerada farsamada fiidiyowga
Goobta Adeegga Maxalliga: Kanada, Jarmalka, Fiyet Nam, Sacuudi Carabiya, Ruushka, Malaysia, Australia, UAE
Goobta Bandhigga: Jarmalka, Vietnam Nam, Sacuudi Carabiya, Ruushka, Kuuriyada Koonfureed, Malaysia
Fiidiyowga-baxa-kormeerka: Waa la bixiyay
Warbixinta Imtixaanka Mashiinka: Waa la Bixiyay
Nooca Suuqgeynta: Badeecad Kulul 2019
Dammaanadda qaybaha muhiimka ah: 1 Sannad
Qaybaha Muhiimka ah: Bamgareeye
Ka dib iibka Adeegga la Bixiyay: Taageero farsamo fiidiyoow, Xarunta adeegga Dibadda ee la heli karo
QODOBADA Iibinta Gaarka ah: Awood qodis sare
Nooca: Mashiinka biyaha xireyaasha ah
Codsi: La taaban karo
Habka Codsiga: Cadaadis Sare
Adeegsiga: Dahaarka Dhismaha
Waxqabadka: Dheecaanka Cirbadda
Eray Muhiim ah: Mashiinka Buuxinta Foornada Polyurethane
Cabir hal xirmo: 55X45X25 cm
Miisaanka guud ee keli ah: 9.000 kg
Nooca Xirmada: kartoon
Tirada (Dajisaa) 1 - 5000 > 5000
1. Miisaanka 9 KGS, la qaadi karo, si sahlan loo qaadi karo & loo ilaalin karo, cadaadiska ugu badan ee soo saarida ilaa 70MPa.
2. Cadaadiska duritaanka: 0-70Mpa (8000-10000Lb)
3. 1 siyaabood oo walxaha quudinta u ah: ku shub
4. Isticmaalka awoodda: 560W / 220V
Saldhigga Tareennada dhulka hoostiisa mara, Tunnel, Culvert, Hagaajinta aasaaska, dejinta carrada, keydka, mashruuca dekedda, dusha sare, burburka, dhismaha ku soo biirista, kalagoynta Crack, Qeybta hoose ee timaha dillaac iwm.
Daloolin 1 dhigay 550W
Tuubada Cadaadiska Sare 1 pc 5M
Qiimaha Xiritaanka 1 dhigay
Dayactirka Qalabka 1 dhigay
Deji shaabad 1 dhigay
T Nooca Buuq 1 dhigay
Suunka Rubber 10 kumbiyuutarada
Sifee 1 pc
Koobka Waxyaabaha 1 dhigay
Ningbo Zhuokang Mashiinnada keydinta tamarta Co., Ltd.
Waxay ku taalaa Bridgeheads of Hangzhou Bay Bridge, Cixi, Ningbo Munici-pality, shirkaddu waxay ka kooban tahay laba warshadood. Waxay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Guanhaiwei Town iyo Xinpu Town siday u kala horreeyaan.
Shirkadda waxaa la aasaasay 2013, iyada oo tii ka horreysay ay ahayd Warshad Qalab-dhismeedka Qalab-tamarta. Laga bilaabo 1991, warshadu waxay bilawday soo saarista mashiinada dharka, xaalada hawada iyo gawaarida iwm .Waxay sifiican ugu qalabeysantahay in kabadan 200 mashiinada CNC iyo mashiinada otomaatiga ah. Cadaadiska sare ee cirbadaha joojinta biyaha daadanaya, mashiinada wax lagu shubo cadaadiska sare iyo sidoo kale walxaha wax lagu qoro ee polyurethane ayaa la bilaabay in la soo saaro lana suuq geeyo ilaa sanadkii 2006, cirbadaha biyaha joojiya gaar ahaan. Waa iib sanadle ah sanadkii 2016 wuxuu ahaa 118 milyan. Badeecada ayaa laga iibiyey Ruushka, Malaysia, Turkiga Hong Kong iyo 28 gobol iyo magaalooyin gudaha ah. Waa soosaaraha ugu weyn ee irbadda joojinta biyaha ee Shiinaha waxayna ku leedahay suuq weyn.
Ningbo Zhuokang Energy-badbaadinta Makiinado Co., Ltd waxay si fiican ugu saleysan tahay istiraatiijiyadda ganacsiga ee daacadnimada, iskaashiga daacadda ah, waxtarka labada dhinac iyo horumarka isuduwidda. Waxaa ka go'an inay dhidibto miyir qabka tayada oo macaamiisha u fidiso adeeg deg deg ah oo lagu qanco oo leh tayo wax soo saar wanaagsan.
Q1: Sidee ku saabsan tayada?
Waxaan ahmiyad sare siineynaa tayada wax soo saarka iyo diiradda saarida warshadaha in kabadan 10 sano
MOQ ee alaabooyin kala duwan ayaa ka duwan. Badanaa, waa 1000 gogo ', laakiin haddii aan amarro kale isla qaadno, QTY yar ayaa la heli doonaa.
Q3: Waa maxay qaababka lacag bixinta ee la heli karo?
T / T, L / C, Paypal, iyo Western Union.
Q4: Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa in la sameeyo sambal?
3-5 maalmood taas oo kuxiran kakanaanta naqshadeeda.
S5: Waxaan ubaahanahay qaab gaar ah, ma soo saari kartaa?
Haa, soo dhowow!
Hore: midab ballaadhan PVC polyetylen xuub biyuhu u dhisaan beerta saqafka, buundada, tunel railyway, barkadda cirka
Xiga: Cadaadiska High grouting PU epoxy duritaanka mashiinka mashiinka mashiinka polyurethane xumbo Buuxinta
epoxy cusbi grouting duritaanka Xirmooyinka steel 13 ...
bamka irbadda duritaanka Cadaadiska Sare ee Grouting ...
Red Cadaadis Sare PCV tubbo tuuboyinka duritaanka M ...
Midab naxaas Cirbadaha Cirbadaha birta ah 13 * 100mm A1 ...